भारतीय गायक हनी सिंहलाई भएको ‘बाइपोलर डिसअर्डर’ के हो ?
पुस १३, २०७४ बिहिवार २१:४८:०० प्रकाशित
एजेन्सी– झन्डै दुई वर्षपछि हनी सिंह स्रोतामाझ आएका छन् । ‘दिल चोर’ गीत मार्फत् फेरि उदाएका उनी यत्रो लामो समय किन गायब भए ? के भएको थियो उनलाई ?
हजारौंका अघि निर्धक्क गीत गाउने हनी सिंह एक समय चार–पाँचजनाका अगाडि पनि गाउन डराउन थालेका थिए । जसकाे कारण हो ‘बाइपोलर डिसअर्डर’ ।
यो डिप्रेशनकै एउटा रुप हो । आफैंमाथि शंका, उदासी, निद्रामा समस्या, आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न मुश्किल र भीडदेखि डराउने यसका केही लक्षण हुन्।
हनी सिंहका आलोचकले यसको कारण ड्रग्सको ओभरडोज भनेका छन् । कतिले सफलता नपचेको बताएका छन् । दुई वर्षदेखि यस्तो आरोप आइरह्यो तर हनी सिंह चुइक्क बोलेनन् ।
हनी सिंहले केही समयअघि आफ्ना बारे खुलेर बोले । उनले भने, ‘धेरैले ड्रग्सको ओभरडोजका कारण म बिरामी भएँ । हाल पुनस्र्थापना केन्द्रम छु भनेको सुनें । तर, म नोयडामा रहेको आफ्नै घरमा थिएँ ।’
उनले सत्य ओकल्दै आफू ‘बाइपोलर डिसअर्डर’बाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । यस क्रममा डाक्टरहरु बदल्दा पनि कुनै असर नपरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ममाथि डाक्टर र औषधिको कुनै असर देखिएन । त्यसैले त्यो अँध्यारोबाट म कहिल्यै बाहिर आउन सक्दिनँ कि भन्ने ठानें । औषधिले पनि मलाई निद्रा लाग्दैनथ्यो । आमा मलाई हेरेर रुनुहुन्थ्यो।’
यस क्रममा आफूले ५० वटा कविता लेखेको बताएका छन् । तर, तिनलाई गीतमा नबदल्ने जनाएका छन्।
यो एकप्रकारको मानसिक रोग हो । जसले मनलाई कति हप्ता, कति महिनासम्म उदास वा फेरि खुशी बनाउँछ । उदास हुँदा नकारात्मक र खुशी हुँदा महत्वाकांक्षी बिचार आउँछन् । सय जनामा एकलाई हुने यो हरेकलाई जीवनको एक न एकपल्ट हुने समस्या हो । यसबाट महिला तथा पुरुष दुवै प्रताडित हुन्छन् । खाशगरी यसको सुरुवात युवा अवस्थामा हुन्छ । ४० वर्षको उमेर कटेपछि हुने सम्भावना भने कम रहन्छ । बाइपोलर विभिन्न प्रकार हुन्छन्।
बाइपोलर एकमा एकपल्ट बिरामी असाध्यै तीव्र उर्साका साथ महत्वाकांक्षी योजना सुनाउँछ । यो ३ देखि ६ महिनासम्म रहन्छ । यदि उपचार भएन भने पनि बिरामी आफैं ठीक हुन सक्छ । यसको दोस्रो रुप पनि हुन्छ । जसले उदास बनाउँछ । लगातार उदास हुँदा डिप्रेशनको सम्भावना रहन्छ।
बाइपोलर दुईमा बिरामी बारम्बार उदास हुने गर्छन् । कहिलेकाहीँ मात्रै खुशी पनि हुन सक्छन्। ¥यापिड साइकलमा चाहिँ वर्षमा चारपल्ट डिप्रेशन र खुशीको चक्र चल्छ।
रोगको मुख्य कारण वैज्ञानिकले अझै पत्ता लगाएका छैनन् । तर, कतिपय अवस्थामा शाररिक रोग र कतिपय अवस्थामा मानसिक तनावले यसको सुरुवात गर्न सक्ने बताइएको छ ।